Markab xoolo waday oo loo diiday dekedda Bosaso oo ku xirtay Mareero – Radio Daljir
Markab xoolo waday oo loo diiday dekedda Bosaso oo ku xirtay Mareero
Febraayo 2, 2018 8:24 b 0
Markab waday sadex kun oo neef oo arri ah ayaa kusoo xirtay marsadda yar ee Mareero ee gobolka Bari, kadib markii uu xoolaha kasoo qaaday dekedda Kismaayo cilad soo wajahday xilli uu marayay xeebaha Badda Cas loo diiday inuu kusoo xirto dekedda Bosaso.
Masuul katirsan ganacsatada markab uu u rarnaa ayaa radio Daljir u sheegay xoolahan inay biyo iyo baad wadeen , kadibna ay ka codsadeen maamulka dekedda Bosaso inuu ka dajiyo xoolaha markabka uu waday, taasi oo ay ka diideen.
Xoolaha ayaa hadda lagu rogay marsad yar oo dabiici ah oo ku taala deegaanka Mareero ee duleedka Bosaso, ganacsatada ayaa sheegaya wasiiro katirsan dowladda inay dadaal ay u galeen in markabka kusoo xirto dekedda Bosaso balse maamulka dekedda Bosaso ee shirkadda P&O Ports ay ku gacan sayrtay iyadoona sheegtay inay lacag ka rabto, taasi oo ganacsatdu ay sheegeen inay bixin karin.
Markabka xoolaha waday ayaa kusii jeeday dekedda Cumaan, sidoo kalle mid ka mid ah shaqaalaha markabka ayaa la sheegay in laga waayay markabka, taasi oo ganacsatada qaarkood ay sheegeen inay sabab u ahayd in loo diido inay kusoo xirtaa dekedda Bosaso si suncad xummo ugu imaan dekedda, maadaama qofkaasi shaqaalaha ka mid ahi loo badinayo inuu geeriyooday.
Masuulka ganacsatada Puntland katirsanaa oo aan waydiinay sababta uu xoolaha uga rari waayay markiisii hore dekedda Bosaso ayaa ku jawaabay.
“Walaal xoolaha hadba meeshii dhow ayaa laga soo raraa, maadaama hadda waddooyinkana ay dheer yihiin way adkaatay in xoolaha laga soo qaaday Kismaayo ama Jubooyinka laga raro dekedda Bosaso isbaarooyin badan awgood iyo lacagaha shirkadda maamulka dekedda Bosaso isma bixin karto” ayuu yiri ganacsadahan oo sheegay inay dhowaan soo bandhigi doonaan wixii ay kala soo kulmeen dekedda Bosaso.
Dhanka kalle markabkii taagga ahaa ee soo jiidi jiray doonyaha dekedda Bosaso ayaa xumaadeen xilli uu isku dayay inuu badbaadiyo doonyo ku dagay dekedda Bosaso, taagaasi ayaa hadda banaanka usoo baxay isagoo burburay.
Masuuliyiinta dekedaha iyo shirkadda maamusha dekedda ayaan wali ka hadlin dhacdadan iyo haddii ay jirto markab kalle ay keenayaan.
Balse maraka ugu horaysa ee arrimahan ay ka hadlaan oo ay suurtagal noqoto ayuu radio Daljir uu idiin soo gudbin doonaa.
Faahfaahin kasoo baxaysa diyaarad ku dhacday Shabeelada hoose